Global Voices teny Malagasy » Nanatontosa Fihaonambe Iraisampirenena Momba Ny Fandringanana Armeniana i Yerevan · Global Voices teny Malagasy » Print
Nanatontosa Fihaonambe Iraisampirenena Momba Ny Fandringanana Armeniana i Yerevan
Voadika ny 30 Avrily 2015 2:46 GMT 1	 · Mpanoratra Joey Ayoub Nandika Naomy
Sokajy: Armenia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Filohan'i Armenia Serzh Sargsyan nandritra ny kabariny. Loharano: Presidential Website 
Nanatrika ny fihaonambe natokana ho an'ny Fahazato taonan'ny Fandripahana ny Armeniana tamin'ny 22 Aprily, natao tao amin'ny Lapan'ny Fanatanjahantena sy ny Rindrankira Karen Demirchyan  ao Yerevan ny Global Voices. Nanasa ireo mpampianatry ny oniversite, mpahay tantara, mpanoratra gazety, mpanao politika sy mpitarika fivavahana ny fihaonambe nitondra ny lohateny hoe “Fifanakalozan-kevitra Manerantany momba ny Ara-tsosialy sy Ara-politika Manohitra ny Heloka Bevavan'ny Fandripaham-Bahoaka” hiresahana momba ny fandripahana ny Armeniana, ny lova navelany ary koa ny voka-dratsiny ankehitriny sy hoavy manoloana ny lalàna iraisampirenena.
Ny filohan'i Armenia Serzh Sargsyan  no nanokatra  ny fihaonambe, nanasongadina ny mahazava-dehibe ny fitadidiana sy ny fahatsiarovana ny zava-niainan'ny Armeniana rehetra izy. “Adidy ara-moraly ny Fahatsiarovana” hoy izy. “Adidy ara-moralintsika sy zontsika ny mahatsiaro ireo niharam-boina atsasaky ny tapitrisa.” Nankalaza ireo mpisintaka tao anatin'ny tantara koa izy, ireo izay nitsangana hanohitra ny vono olona tao anatin'izany. Notanisainy tamin'izany i Irena Sendler r sy Raoul Wallenberg  nandritra ny Famonoana Tambabe, Paul Rusesabagina  nandritra ny fandripahana Rwandey ary i Van Chhuon  nandritra ny fandripahana ny Kambodziana.
Tahaka ny tamin'ny fandringanana Armeniana, nilaza izy fa “tsy nanadino ny Armeniana ary feno fankasitrahana ireo Kiorda sy Tiorka izay namonjy ny ain'ireo Armeniana mpifanolobodirindrina amin-dry zareo.” Nisaotra ihany koa izy ny “vahoaka Arabo izay nanome fialofana ireo afa-nandositra tamin'ny yatagan  Tiorka tery dia tery, ary nankasitrahany ihany koa ireo Rosiana, Amerikana sy Eoropeana, izay nikarakara ireo kamboty Armeniana na niezaka nanao ny fahalalaha-tanana mahaolona.”
Ny Filohan'i Armenia Serzh Sargsyan nandritra ny kabariny. Loharano: Presidential Website 
Taorian'ny kabariny no nilatsaka ny fanamarihan'i Karekin II , «Catholicos-n'ny Armeniana rehetra» sady lehibe fara-tampon'ny Fiangonana Apostolika, noho ny filàn'ny Kristiniana mba hiray hina hatrany ao Afovoany Atsinana sy ny tontolo miatrika fampijaliana, milaza momba ny fanenjehana ankehitriny iaretan'ireo eo am-pelatanan'ny vondrona mahery fihetsika Firenena Islamika. Niresaka momba ny enta-mavesatra zakain'ny Armeniana ankehitriny noho ny fandripahana ny Armeniana sy ny politikan'ny fandavan'ny governemanta Tiorka manampy trotraka ny fijaliana ihany koa izy.
Karekin II. Pikantsary tamin'ny mivantana.
Tonga avy eo ny resadresaka nanaitaitra avy amin'i Thorbjørn Jagland , sekretera jeneralin'ny Vaomieran'i Eoropa . Navoitran'i Jagland, imbetsaka, ny mahazavadehibe ny fiasana miaraka hiala amin'ny nasionalisma ary ‘hamihina ny internationalisma’. Nolazainy ny fihaonany tamin'ny mpitarika Palestiniana tamin'izany fotoana izany; dia i Yasser Arafat  ka nandritra izany no nihaonany tamin'ny pretra Palestiniana-Armeniana izay mbola nitondra ‘Nansen Passport ’ (pasipaoro Nansen), anarana pasipaoro avy amin'i Fridtjof Nansen , izay kaomisera ambony nisahana ny mpialokaloka  tamin'izany fotoana izay ary nahazo loka Nobel fandriapahalemana tamin'izany fotoana izany noho ny asany niarahany tamin'ny mpialokaloka.
Niasa i Nansen hametraka antonta-taratasy ho an'ny mpialokaloka mba ho ankatoavina iraisampirenena, Pasipaoro Nansen, navoakan'ny talohan'ny Firenena Mikambana — dia ny Ligin'ny Firenena — izay nahavonjy mpialokaloka maro, anisan'izany ny Armeniana, hahita fialofana tamin'ireo firenena manodidina. Noderain'i Jagland i Nansen sady nanipika fa mbola atrehina ny fanamby mitovy, raha tsy lehibe kokoa, noho ny taloha, raha tononina ny ady an-trano Libyana sy Syriana ary ny voina vao haingana tao Lampedusa.
Torbon Jagland. Loharano: Pikantsarin'ny fandefasana mivantana ny fotoana.
Narahin'ny Profesora Daniel Feierstein , Filohan'ny Fikambanana Iraisampirenen'ny Manampahaizana momba ny Fandringanam-Bahoaka. Nohamafisiny indray ny anjara adidin'ny manampahaizana momba ny fandringanana hampankatoavana ny fisian'ny fandringanana nahazo ny Armeniana, Grika ary Asyriana nataon'ny Ampira Ottoman. Nolazainy fa ny fandripaham-bahoaka dia mampiditra ny “fandravana ny mari-panondroana ireo gejaina sy ny fanerena hametrahana ny mari-panondroana nasionalin'ny mpangeja.” Naveriny ny fampitandreman'i Jagland amin'ny loza mety ateraky ny nasionalisma raha nanonona ny trangan'ny Pan-Tiorkisma, Pan-Alemanisma ary ny Pan-Serbianisma tao amin'ny Ampira Ottoman, Alemaina Nazi ary Yugoslavia, raha alahatra, sy ny ilàna ampidirana ireo manampahaizana momba ny fandringanana ao anatin'ny ezaka hisorohana amin'izay mety ho fandringanam-bahoaka manaraka eo.
Nandritra ny elanelana folo minitra no nampisehoana tamin'ireo delegasiona nanatrika ny valandresaka ny sarin'ireo Fandringanana maro, nanomboka tamin'ny Armeniana, Asyriana sy ny Grika ka hatrany amin'ny Kambojiana sy Rwandey, nanavatsava ny Sorona Fandringanana (Holocaust) sy ireo hafa vitsivitsy. Nampiaiky ihany koa i Raphael Lemkin, Poloney mpahay lalàna, izay nihetsi-po tamin'ny toe-draharaha nahazo ny Armenians, ka nalaza tamin'ny fisokirana ny voambolana ‘fandringanam-bahoaka’.
Daniel Feierstein. Pikantsary avy amin'ny fandefasana mivantana.
‘Tolon'ny Fahatsiarovana sy ny Fanadinoana’
Ny andiany faharoa amin'ny valandresaka dia nanomboka tamin'ny lohahevitra hoe “Ny Resaka Andraikitra sy Famafana ny Vokatry ny Fandringanam-bahoaka.” Roger W. Smith  nonanomboka azy, mpampianatra ambaratonga ambony malaza iraisampirenena izay nianatra ny politikam-pandavan'ny governemanta tiorka. Nomarihany fa ankilan'ny fanejehana ara-pitsarana sy ny fanerena ambadika mahazatra, dia miezaka ny mamasoka ny vonomoka armeniana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny “hirifiry mitovy” ny governemanta tiorka amin'ny ilazàny fa mitovy ny hirifiry niaretan'ny Tiorka sy ny Armeniana nandritra ny korontan'ny Ady Lehibe Voalohany. Tamin'ny fanazavany ny fahatongavany teo amin'ny valandresaka no nanatsongany ny tenin'i Milan Kundera, mpanoratra Frantsary-Tsheky hoe : “Ny tolon'ny olona iray amin'ny fahefana dia ny tolon'ny fahatsiarovana manoloana ny fanadinoana.”
Tonga avy eo ny anjaran'i Henry Theriault  avy amin'ny Vondrona Mpamakafaka ny Fanonerana ny Fandringanana Armeniana. Tian'i Theriault esorina ny anganongano fa mety ho ny faratampon-danonana ny fahatsiarovana ny fahazato taona ny Vonomoka. Nohamafisiny aza fa tetezamita mankany amin'ny fankatoavana rahatrizay io. Nampahatsiahiviny ny tao an'efitrano lehibe ihany koa, hotehafina mafy, fa tsy ny Armeniana irery no vahoaka mitaky ny fankatoavana ny fisian'ny Fandringanana. Notanisainy ihany koa ny Fandringanana ny Asyriana sy ny Grika mbamin'ny vahoaka Herero sy Namaqua izay niaritra ny Fandripahana nataon'ny governemanta Alemana ao Afrika Atsimo Andrefana (Namibia ankehitriny) ary ny Nanjo ny Amerikana teratany.
Rehefa nahatapitra i Theriault, dia nandray ny Tiorka mpandray fitenenana voalohany tamin'io andro io ny valandresaka. Mpahay ara-politika i Cengiz Aktar , mpanoratra sady mpanao gazety fantatra indrindra amin'ny fanentanana “Miala tsiny aho ” miantso ho amin'ny fialan-tsinin'ny Tiorka amin'ny Armeniana noho ny vonomoka nahazo ny Armeniana, izay nosoniavin'olona 32.000.
Cengiz Aktar. Loharanom-pitaovana: Pikantsary avy amin'ny mivantana.
Notaterin'i Aktar ny fitomboam-peon'ireo hetsika mampankatò ny nisian'ny heloka fandripaham-bahoaka ao amin'ny fiarahamonina Tiorka. Farafahakeliny samy efa namoaka boky iray momba ny fandripahana Armeniana avokoa ny trano lehibe famoaham-boky aman-gazety Tiorka ary efa lasa mora ekena eo amin'ny sehatra akademika ny ‘tarehintsoratra G’. Misy ireo taranaka Armeniana sasantsasany izay voatery nivadika ho any amin'ny Islam hamonjeny ny ainy — ireo lazaina ho Armeniana nosilamoana ireo, na Armeniana miafina  — ireo dia niverina indray ho any amin'ny vala kristiana, raha misy kosa ireo Armeniana silamo no mijanona ho silamo saingy mitaky ny maha-armeniana azy. Ny fotoam-pahatsiarovana imasom-bahoaka voalohany ny vonomoka dia notonosaina tao amin'ny Kianja Taksim tamin'ny 2010 ary, ny zavadehibe kokoa, olom-pirenena avy amin'ny tanandehibe tiorka 28 farafahakeliny no miomana hanatontosa ny fahatsiarovana amin'io Zoma io.
Farany i Esther Mujawayo no niakatra ny sehatra. Sisa niangan'ny vonomoka tany Rwanda i Mujawayo ary miara-miasa amin'ny sisa niangan'ny fandripahana amin'ny maha-sosiolojista azy amin'izao fotoana. Nampihetsi-potokoa ny kabariny ary mitsahatra izay mba hifoka rivotra kely. Tamin'ny fitsanganany nanoloana ny mpanatrika dia nitafy araka ny fomba Tutsi nentim-paharazana izy. Nahoana?
“Satria nampiboridanina ny renintsika. Dia miakanjo ny fitafiako aho ho an'ny reniko sy reninareo.”
Esther Mujawayo. Loharanom-pitaovana: Pikantsary nandritra ny mivantana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/30/69558/
 Presidential Website: http://www.president.am/en/press-release/item/2015/04/22/President-Serzh-Sargsyan-Genocide-global-forum-April-22/
 Lapan'ny Fanatanjahantena sy ny Rindrankira Karen Demirchyan: http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Demirchyan_Complex
 Serzh Sargsyan: http://en.wikipedia.org/wiki/Serzh_Sargsyan
 Irena Sendler: http://en.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendler
 Raoul Wallenberg: http://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Wallenberg
 Paul Rusesabagina: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Rusesabagina
 Van Chhuon: http://www.animistfarmfilms.com/projects/7-the-poorest-man
 Karekin II: http://en.wikipedia.org/wiki/Karekin_II
 Thorbjørn Jagland: http://en.wikipedia.org/wiki/Thorbj%C3%B8rn_Jagland
 Vaomieran'i Eoropa: http://www.coe.int/fr/web/portal/home
 Yasser Arafat: http://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat
 Nansen Passport: https://mg.globalvoices.orgen.wikipedia.org/wiki/Nansen_passport
 Fridtjof Nansen: http://en.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen
 kaomisera ambony nisahana ny mpialokaloka: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_High_Commissioner_for_Refugees
 Daniel Feierstein: https://www.youtube.com/watch?v=0-v-5RTt3CQ
 Roger W. Smith: http://www.armeniapedia.org/wiki/Roger_Smith
 Henry Theriault: http://armenianweekly.com/author/henry-theriault/
 Cengiz Aktar: http://en.wikipedia.org/wiki/Cengiz_Aktar
 Miala tsiny aho: http://en.wikipedia.org/wiki/I_Apologize_campaign
 Armeniana miafina: http://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_Armenians